Shirkadda Turkiga ah ee la wareegtay dekeda Muqdisho oo mooshin laga geeyey baarlamanka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 22 September 2014 23 September 2014
Mareeg.com: Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta loo gudbiyey mooshin ka dhan ah shirkadda Turkiga ee Albeyrak, taasoo shalay la wareegtay maamulka dekedda Muqdisho.
Kulanka Baarlamaanka ee maanta oo ahaa Kalfadhiga 5-aad fadhigiisa 1-aad oo uu shir guddoominayey Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Mahad Cabdalla Cawad, ayaa waxaa soo xaadiray 139 Xildhibaan.
Ajandaha kulankana waxa uu ahaa qeybinta mooshin ka dhan ah jebinta qaraarkii Baarlamaanka ee la xiriiray Dekedda Muqdisho kaasi oo ay Golaha usoo gudbiyeen Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka.
Xildhibaan C/qaadir Maxamed Aadan (Sandheere) oo ka mid ah Xildhibaannada soo saxiixay mooshinkan ayaa ka hor akhriyey Baarlamaanka waxaana uu xusay in mooshinkan ay soo raaciyeen cabashada howlwadeenada Shirkadaha maraakiibta, xoogsatada Majakuus iyo Muruqmaalba muhiimaduna ay tahay sababta loo jebiyey qaraarkii uu horey u qaatay Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Guddoomiye ku xigeenka Labaad ee Baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad ayaa Xildhibaannada u faah faahiyey nidaamka sharci ahaan ay tahay in la marsiiyo heshiisyada caalamiga ah ee maalgashiga shisheeye waxaana uu dhanka kale Baarlamaanka ka hor akhriyey qoraal uusoo gudbiyey hanta dhowrka guud ee Qaranka kaasi oo ku saabsanaa heshiiska Dekedda Caalamiga ah ee magaalada Muqdisho.
Xildhibaannada Baarlamaanka ayaa qeybinta mooshinka iyo akhrinta qoraalka ka soo baxay xafiiska Hanti dhowrka guud ee Qaranka waxa ay gudagaleen soo jeedinta talooyin la xiriira talaabada la qaadayo taasi oo badankeed noqotay in loo yeero Ra’isulwasaaraha Xukuumadda si uu Baarlamaanka uga jawaabo su’aallo la xiriira cida jebisay qaraarkii uu Baarlamaanka horey uga qaatay arintan iyo halka ay ku dambeysay natiijada guddi uu Ra’isulwasaaraha arintaasi u saaray.
Guddoomiye ku xigeenka Labaad ee Baarlamaanka Mahad Cawad oo gebagebadii kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay in Guddoonka Baarlamaanka uu Ra’isulwasaaraha Xukuumadda u yeerayo sababta uu Golaha Shacabku arintan u eegayana ay tahay in aanan la dulmin xuquuqda shaqaalaha Soomaaliyeed ee ka shaqeeya Dekedda caalamiga ah ee Muqdisho.
02-April ee sanadkan 2014 ayaa Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya waxa uu soo saaray qaraar uu ku dalbanayey in aanan lagu wareejin Karin dekedda Muqdisho shirkadda Al-Beyrak ee dalka Turkiga ilaa inta heshiiskaasi Baarlamaanka laga hor keenayo waxaana hada ay arintu ku soo biyo shubatay in loo yeero Ra’isulwasaaraha Xukuumadda si uu Baarlamaanka jawaab uga siiyo arinta la xiriira dekedda caalamiga ah ee magaalada Muqdisho oo ah isha ugu weyn ee dhaqaalaha uu kasoo galo DFS.
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa debadbaxyo iyo cabasho dhigayey boqolaal ka tirsan xoogsatada dekedda Muqdisho oo la sheegay in shaqada laga eryayo marka shirkadda Turkiga ah la wareegto maamulka dekedda.
Madaxweyne Xasan oo u ambabaxay Mareykanka